Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nikon D7000 DSLR, D5100, D3100
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nikon D7000 DSLR
Kala duwan ka soo sawiro nooc-filim, sawiro digital si fudud loo tirtiri karaa adigoo riixaya ah "Delete" button taxaddar la'aan ama si qalad ah, feature hanjabaad u kamaradaha digital, sida Nikon DSLR D7000, D5100, D3100, iwm One dhaqaaqo qaldan tirtirto laga yaabaa in aad u qiimo badan oo dhan sawiro. Warka fiicani waxa weeye in dhammaan photos tirtiray aan run ahaantii tageen ka dib markii tirtirka. Kaydinta, halkaas oo ay la joogay oo keliya ayaa ku calaamadeysan yihiin oo bannaan dib u isticmaal. Sidaa darteed, iyada oo qalab soo kabashada sawir sax ah, waxaad soo kaban karto sawiro tirtiray ka Nikon DSLR D7000, D5100, ama D3100 fudayd.
Wax First hore u dhaco: joojiso isticmaalka aad camera Nikon mar Kabcada_ dhacaya, sida sawiro cusub ama videos qabsadaan, iska ilaalinta photos tirtiray ka overwritten.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Nikon D7100 DSLR
First of dhan, aad u hesho sawir qalab kabashada Nikon D7000 DSLR ah halkan: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Labada of software ka taageertaa dib u soo kabashada ee photos, video iyo files audio ka Nikon DSLR D7000, D5100 Nikon, D3100 Nikon, iwm, iyadoo aan loo eegayn waxaad iyaga waayay tirtirka, formatting ama sababo kale.
Download version maxkamad free of Nikon DSLR D7000 software kabashada sawirka hoos ku hadda.
Step1. Orod DSLR D7000 software Nikon kabashada sawir
Ka hor inta socda barnaamijka, xirmaan camera aad u computer la cable ah digital oo hubi waxa ay u muuqataa sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas ordi barnaamijka oo guji "Start" furmo suuqa hoose si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Step2. Dooro camera Nikon oo iskaan
Next, camera aad sidoo kale waxaa lagu ogaan doonaa sida warqad drive by barnaamijka halkan ah. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si aad u hesho sawiro tirtiray waxa on.
Step3. Kabsado photos tirtiray ka Nikon D7000 DSLR
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable lagu soo bandhigi doonaa natiijada baaritaan, oo ay ku jiraan sawirrada, video iyo maqal ah. Waxaad ku eegaan kartaa sawiro recoverable si loo hubiyo tayada hor soo kabashada. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" button in dib la mid click iyaga u hesho.
Fiiro gaar ah: Maskaxda ku hay in aadan ku kaydiso xogta soo kabsaday aad camera Nikon ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale oo u badbaadin doonaa sida aad PC ama qaar ka mid ah disk kale oo bannaanka ah, si loogu tixgeliyo ammaanka.
Video tutorial ah Nikon kabashada D7000 Photo